Android Wear မှ LG G Watch ကို Wi-Fi အထောက်အပံ့မှဖယ်ထုတ်လိုက်သည် Androidsis
LG G Watch သည် Wi-Fi အထောက်အပံ့ကို Android Wear တွင် အသုံးပြု၍ မရပါ
အလက်ဆစ် မာတီနက်ဇ် | | စမတ်နာရီ, Android ဗားရှင်း
Google Smart Watch, Android Wear အတွက်ထုတ်လုပ်ထားသော operating system အသစ်၏စွမ်းဆောင်ချက်အသစ်များနှင့်အတူ 5.1 ကိုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်သောသတင်းအသစ်သည်ယမန်နေ့ကသတင်းရရှိခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စမတ်နာရီများမှကျွန်ုပ်တို့၏စမတ်နာရီများကိုစီမံခန့်ခွဲရန်ဗားရှင်းအသစ်တစ်ခုရှိပုံကိုယနေ့ကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်နိုင်ပါပြီ၊ တစ်ချိန်တည်းမှာထုတ်ကုန်နှစ်ခုကိုစီမံခန့်ခွဲနိုင်စွမ်း.
ကောင်းပြီ၊ ဝတ်ဆင်နိုင်သောကမ္ဘာနှင့်သက်ဆိုင်သောသတင်းများနှင့်စမတ်နာရီများအတွက်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသောဤ operating system နှင့်ဆက်နွှယ်နေသော်လည်းဤအချိန်သည်သတင်းဆိုးဖြစ်သည်။ LG G Watch ကိုအသုံးပြုသောအသုံးပြုသူများသည်ဤအချိန်ကတည်းကအောက်ပါလိုင်းများကိုဖတ်လိုကြမည်မဟုတ်ပါ Android Wear အသစ်နှင့် Wi-Fi အထောက်အပံ့ရှိမည်မဟုတ်.
smartwatch အတွက် operating system ၏ update ကိုမနေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့သောသတင်းများအရအခြားသူများထက် ပို၍ ထူးခြားသောအချက်တစ်ချက်ရှိသည်။ ဤအသစ်အဆန်းသည်ပိုမိုကောင်းမွန်သော Wi-Fi အထောက်အပံ့ရှိခြင်းနှင့်စမတ်ဖုန်းကိုမသုံးဘဲဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများကိုလက်ခံခြင်းနှင့်ဖြေကြားနိုင်ခြင်းတို့အတွက်မည်သည့် Wi-Fi ကွန်ယက်ကိုမဆိုဆက်သွယ်နိုင်ခြင်းအားဖြင့်နာရီကိုပိုမိုလွတ်လပ်စွာပြုလုပ်နိုင်သည်။
ကောင်းပြီ၊ ဒီ update နဲ့အတူလိုက်ဖက်တဲ့နာရီတစ်လုံးပါ ၀ င်ပြီး LG G Watch ကတော့အဲဒီစာရင်းထဲမှာမပေါ်ပါဘူး။ ထို့ကြောင့် Android Wear နောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်းသို့အဆင့်မြှင့်တင်သော်လည်းပထမ ဦး ဆုံး Android Wear စမတ်နာရီများထဲမှတစ်ခုသည်ဤအသုံးအဆောင်မှကုန်သွားသည်။ ဒီပစ္စည်း၏ပိုင်ရှင်များအတွက်မကောင်းသောသတင်းနှင့်အမှားဖြစ်သည် စမတ်နာရီဟာဟာ့ဒ်ဝဲမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ် ဤလုပ်ဆောင်မှုများကိုလုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်သည် (၎င်းတွင် Wi-Fi ချစ်ပ်မရှိသောကြောင့်) ။
သို့သော်လက်ရှိ Android Wear တစ်ခုလုံးတွင်ဤအသုံးအဆောင်ရှိလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့် Sony၊ Motorola သို့မဟုတ် LG တို့မှ G Watch R နှင့် G Watch Urbane တို့မှစမတ်နာရီများက Wi-Fi အထောက်အပံ့အသစ်ကိုခံစားနိုင်မည်ဖြစ်သည် သူတို့ရဲ့ updates များကိုအတည်ပြုခဲ့သည်။ သို့သော် Samsung ၏ Android Wear စမတ်နာရီသည်ဤလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိမရှိကိုမသိရသေးပါ။
ဒီဟာကပထမ ဦး ဆုံးစမတ်နာရီနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကြိမ်ပေါင်းများစွာပြောခဲ့တာတွေကိုပြတယ်။ စားသုံးသူသုံးစွဲသူများ၊ developer အသုံးပြုသူများနှင့်ထုတ်လုပ်သူများအတွက်စမ်းသပ်မှုတစ်ခုဖြစ်သောမျိုးဆက်တစ်ခု။ လာမယ့်နှစ်တွေအတွင်းရောက်ရှိလာမယ့်ဒီဝတ်ဆင်နိုင်တဲ့ထုတ်ကုန်မျိုးဆက်သစ်တွေကိုတိုးတက်အောင်ကူညီပေးမယ့်မျိုးဆက်တစ်ခု။ ပြီးတော့သင်, စမတ်နာရီပထမမျိုးဆက်သည်လူတိုင်းအတွက်စမ်းသပ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုသင်ထင်ပါသလား ?
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » စမတ်နာရီ » LG G Watch သည် Wi-Fi အထောက်အပံ့ကို Android Wear တွင် အသုံးပြု၍ မရပါ
မူပိုင်ခွင့်စစ်ပွဲ - ZTE သည် P8 နှင့် X2 တို့အတွက် Huawei ကိုရှုတ်ချသည်
Android မှာကြော်ငြာ ID ကို reset လုပ်နည်း